Fandefasana Etazonia - Jiro MediaLight Bias
USPS First Class Mail: Maimaimpoana amin'ny vidiana rehetra
Fandefasana 2-andro FedEx: Maimaimpoana amin'ny fividianana $ 40 na mihoatra
(Raha tsy izany dia $ 4.95 ho an'ny kaomandy kely kokoa)
Fandefasana ny FedEx Andro manaraka: $ 28.00
Ny ankamaroan'ny USPS First Class Mail dia ho tonga afaka 2-4 andro, fa, tsy toy ny FedEx na UPS, tsy azo antoka ara-potoana izy io.
Ny safidy UPS dia misy ihany koa amin'ny vidiny lafo, fa ny tahan'ny UPS dia ambony noho ny FedEx 2-Andro.
????Raha adiresy PO na APO / FPO ny adiresinao, hampiasa mailaka kilasy voalohany izahay na inona na inona fomba fandefasana voalaza ao amin'ny checkout. Ny fonosana kilasy voalohany dia mety halefa amin'ny andro fiasana manaraka satria tsy manana pickup USPS isan'andro intsony isika (saika ny FedEx no ampiasainay).
Ny fotoana fanaterana rehetra dia tombana ho an'ny mpitatitra. Raha toa ka tsy tonga amin'ny ora voatondro ny fandefasana entana mandritra ny alina na 2 andro dia tsy hamerina ny fandefasana izahay raha tsy mendrika ny famerenam-bola avy amin'ny mpitatitra. Amin'izao fotoana izao, tsy misy mpitatitra manome voninahitra ny antoka fandefasana, noho izany, tsy misy famerenam-bola amin'ny fandefasana. Manantena izahay fa hiova tsy ho ela izany.